Raha tsiahivina, toa nampiteraka ady mangatsiaka teo amin’ny minisitry ny vola sy ny tetibola Gérvais Rakotoarimanana sy ny solombavambahoaka maro ity resaka ity, ary efa nisy ny resaka nivoaka tany am-piandohana fa mitaky ny fialan’io minisitra io ny depiote noho ny tsy fanomezana fiara azy ireo. Anio no holaniana eo anivon’ny fivoriambe io volavolan-dalàna io, raha ny fandaharam-potoana nofaritana omaly. Mbola adihevitra tsy mety tapitra eto amin’ny firenena ity fitakiana fiara ity. Toy ireo mpiasam-panjakana ambony, izay mahazo fiara hoenti-miasa dia zon’izy ireo ny mahazo izany, raha ny fanazavan’ny ankamaroan’ireo depiote. Ho an’ny depiote avy any Moramanga, Randriamahefa Henri Charles, ohatra, dia nambarany fa ilaina tokoa io fiara io hanatanterahana ny asa. Sarotra ny fitsidihana ireo vahoaka noho ireo tanàna sasany izay lavitra sy mbola misy ratsy lalana ka mety hahazo tsiny amin’ny vahoaka sy hiteraka alahelo, ary mety ho raisin’izy ireo ho tsy firarahiana azy ny tsy fahafahan’ny olom-boafidy midina eny ifotony noho ny tsy fisian’ny fitaovana hahafahan’izy ireo mivezivezy, hoy ity olom-boafidy ity. Ny olana eto amintsika anefa dia tsy misy ny sehatra mpanara-maso hoe mahavita ny asany an-tsakany sy an-davany tokoa ve ireny olom-boafidy ireny sa dia faly ny higoka sy hisitraka tombontsoa maro fotsiny, kanefa ny vahoakany efa tena difotry ny fahantrana tsy misy mpiraharaha ? Tokony hisy ihany ny sivana sy ny fanaraha-maso mba tsy ho vola natao fafy katrana ny tombontsoa omena azy ireny fa hisy fiantraikany amin’ny sosialy.